Itoobiya oo Bur Bur Qarka u Saaran/ Africa Intelligence – Rasaasa News
Itoobiya oo Bur Bur Qarka u Saaran/ Africa Intelligence
Wargayska Caanka ah ee Indian Ocean ayaa qoraal dheer ka qorey Siyaasada Dalka Itoobiya, Doorashada soo socota ee 2015, Xisbiga EPRDF Iyo qul qulatooyinka Siyaasadeed ee ka socda Dalkaas Itoobiya. Wargayska oo ah mid ku xiran illa sirdoon ayaa u kuur gala Siyaasada Dalalka Afrika wuxuuna qoraal dheer oo uu ka diyaariyay Itoobiya ciwaan ooga dhigay “ ETHIOPIAN GOVERNMENT QUIETLY DISINTEGRATING: Dowlada Itoobiya soo si tartiib ah u kala fur-furaynaysa (Daadanaysa).
Wargaysku wuxuu sheegay in Doorashada Itoobiya fooda ku soo haysa waxa kalli ah ee isku xidhaya Xisbiga, Barlamaanka Iyo Axsaabta Dalka tahay oo kali ah Ammaanta Melez Zenawi balse aysan jirin fikir Siyaasadeed oo xooggan oo ay ka midaysan yihiin Qoomiyadaha talada Dalka Itoobiya haye, waa Qoomiyada Tigreega, Oromada Iyo Xabashida.
Qoomiyada Xabashida Iyo Oromada waxaa u muuqda kala daadsanaanta Qoomiyada Tigreega Iyo Itoobiya waxayna ka daawanayaan dushaas mana doonayaan innay ku deg degaan go,aan qaldan ayuu Wargaysku sheegay.
Kala qaybsanaanta Xisbiga EPRDF waa mid meel xun maraysa waana mid kacdoon Xooggan uu ka dhex jiro, ayuu wargaysku qoraalka ku qeexay!
Wargayska oo soo xigaya Illo Sirdoon wuxuu sheegay in Ururka TPLF oo dhowr garab yahay kuwaas oo wiiqay Awoodii Dalka mida gudaha Iyo Dibadana wuxuuna haddalka sii raaciyay in Itoobiya Siyaasadii Arrimaha Dibada hoos u dhacday Iyadoo arrinta Koonfurta Sudan si toos ah uu ugala wareegay Madaxwaynaha Dalka Uganda Yuweri Mussevini, meesha Dowlada Itoobiya wakiil ooga dhigtay Wasiirkii Arrimaha Dibada ee horre Seyoum Messfin.
Dhanka Kalle Wargaysku wuxuu sheegay in Siyaasadii Ciidanka Itoobiya ku hayeen Jamuuriyada Soomaaliya iyagoo oogu gabanaya Urur-Gobaleedka IGAD ay fashil qarka u saaran tahay!
Ra;iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya waa mid awood aan lahayn, waana mid tallada Dalka jahawareer ku jirto ayuu sheegay Wargaysku, horrey waxaa loo sheegay in Ciidanka, Sirdoonka Iyo Madaxda Dalka gaar ahaan ha u badnaadaan Qoomiyada Tigreegu aysan maqal amarka RW, waana mid Dowladaha Reer Galbeedku isha ku hayaan oo ay daawanayaan!
Dhanka Kambaniyada Dowlada Maamusha sida, Isgaarsiinta Iyo Korantada ayuu sheegay wargaysku innay ka taagan tahay Dhibaato adag iyadoo Gobalada Qaarkood aysan helin Koronto ku fillan, iyadoo sababta u weyn tahay dhanka Biyaha Iyo Farsamada oo Mashiinada Koranta ka dhaliya Biyaha oo laga keenay Dalka Hindiya ay ahaayeen kuwo horrey loo soo isticaamalay!
Arrinta Gobalaysiga ama Maamul Gobaleedyadu waxay noqotay mid sii kordhaysa ” ayuu yiri Wargaysku”
Mar uu Wargaysku ka hadlayay Kacdoonka Xooggan ee Ardayda Oromadu wadaan ayuu sheegay in qayb ka tahay arrintan khilaafka Xisbiga EPRDF iyadoo Ururka OPDO ee Oromada Saraakiishu hoosta ka wadaan Mudaaharaadka kuwaas diidan is balaadhinta Magaalada Addis Ababa oo Gobalka Oromada ama Deegaanada Oromada lagu xalaalaysanayo.
Dhaqaalaha Iyo Siyaasada Dalku waa mid bur bursan ayuu sheegay Wargayso isagoo qormadan ay mid tahay haddalka dheer oo Itoobiya laga qorey. The economy and diplomacy are broken – Ethiopian diplomacy suffers from a lack of leadership at the top of country
Waxaa Turjumay Maxamed Faarax/Ogadentoday
Ciidanka Atoobiya oo Hub Gaadhsiiyey Gudoomiyaha Gabalka Gedo